Maxkamad kutaala caasimada Nairobi oo codsatay 14 maalmood oo baaritaan dheeraad ah lagu sameeyo dr James mugo. | Risala FM-The Voice of Horn Africa
Maxkamad kutaala caasimada Nairobi oo codsatay...
Maxkamad kutaala caasimada Nairobi oo codsatay 14 maalmood oo baaritaan dheeraad ah lagu sameeyo dr James mugo.
maxkamad kutaala caasimada dalka ee nairobi ayaa kacodsatay in gacanta lagusii hayo mudo 14 maalmood ah dr James Mugo oo ku eedeeysan fal kufsi ah oo uu ugaystay dumar bukaan ah oo kusoo booqday goob caafimaad oo uu kulahaa caasimada dalka ee nairobi si loo helo baaritaano cadeeynaaya eedeymaha loo haysto ninkani.
booliska caasimada nairobi ayaa ninkan gacanta kudhigay xili uu ka qureecanaayay hotel limuru shalay oo khamiis aheyd waxeyna isla markiiba utaxaabeen xabsiga.
magaca ninkan ayaa soo ifbaxay kadib markii lagusoo eedeeyay falal kufsi ah oo uu ugaystay dumar bukaano ah oo yimid goob caafimaad oo uu kulahaa caasimada dalka ee nairobi.
muqaal argagax badan oo lagu qaaday camerada qarsoon oo uu baahiyaya tvga citizen ayaa muujinaayay ninkan oo fal anshax xumo ah kula kacay haweeneey goobtiisa caafimaadka utimid hawlo baaritaam caafimaad.
arintan ayaa noqotay mid aad maalmahan looga hadal hayay guud ahaanba dalka iyadoo ay sidookale soo xigteen qaar kamid ah warbaahinada caalamiga ah.
kenyaanka ayaa arintan waalac ka muujiyay iyadoo la sheegay in ninkan inuusan aheyn dr aqoon buuxda leh taasoo keenikarta in baaritaan buuxa lagu sameeyo dad badan oo dhaqaatiir ah kuwaasoo ka hawlgala guud ahaanba dalka.